Isku-darka Hawada, Silsiladaha, Qaliinka, Qalabka - SNS Pneumatic
Isku Darka Hawada
Si loo buuxiyo arjiga warshadaha ballaaran, SNS waxay leedahay taxane fara badan oo ah qalabka xakamaynta cadaadiska hawada iyo hawada ee FRL. Iyada oo leh tayo aad u kalsoon oo xasilloon muddo ka badan 20 sano, unugyada daaweynta ilaha hawada ee SNS ayaa had iyo jeer ah xulashada saxda ah ee macaamiisha.
SNS waxay soosaartaa qalabyada xulashada adag ee dhammaan qaybaha oo ay ku jiraan aluminium, gariiradda, gu'ga, shaabadda, dufanka, magnet… oo ka kala imanaya taxane Shiinaha iyo shirkado caalami ah. Mashiinka saxda ah ee saxda ah iyo habka aadka loo xakameeyo ee qaybo kasta oo muhiim ah iyo isu soo uruurinta / tijaabinta ayaa sameeya SNS kasta oo tayo sare leh hubin iyo xasilooni. Si loo taageero maalinlaha sii kordhaya ee warshadaha shuruudaha cusub, SNS waxay si joogto ah u horumarisaa kala duwanaansho cusub sanad kasta. Ilaa hada, waxaan leenahay waalka solenoid, dareeraha dareeraha, waalka hawada, waalka garaaca wadnaha, waalka jeeg, waalka xakamaynta qulqulka, waalka farsamada, waalka gacanta, waalka lugta, waalka degdega ah ee qiiqa, waalka gawaarida, iwm.
Qalabka pneumatic sidoo kale waa mid aad muhiim u ah oo lagama maarmaan u ah nidaamyada pneumatic gaar ahaan tuubada iyo qalabka. SNS waxay leedahay in kabadan 20-sano oo khibrad ah soosaarida qalabka, hada waxaan haysanaa noocyo kaladuwan oo riix caag ah oo rakiban, biraha riixida rakibida, iskuxirayaasha pneumatic, qalabka pneumatic, tubbada PU, tubbada PA, aamusiyaasha hawada, cabirrada cadaadiska, qoryaha hawada, iwm SNS sidoo kale astaysto alaabta haddii macaamiisha ay leeyihiin shuruudo gaar ah. AKHRI WAX DHEERAAD AH
SNS waxay bixisaa noocyo kala duwan oo noocyo silsilad pneumatic ah si ay u taageeraan nidaamka warshadaha otomatiga, oo ay ku jiraan dhululubo caadi ah iyo dhululubo aan caadi ahayn. Noocyada silsiladda pneumatic waxaa ka mid ah silsilad isku xiran, silsilad yar, silsilad is haysta, silsilad labalaab bistoolad ah, silsilad slide ah, silsilad bilaa rod ah, gripper pneumatic ah, silsilad irbad ah, silsilad wareega ah, isku haysa silsiladda wareega, iwm. isu geynta iyo tijaabinta, SNS waxay noqotay shirkad horseed u ah soosaarida warshadaha otomaatiga.
Waxaan sidoo kale haysannaa qayb yar oo ka mid ah alaabada Haydarooliga: kuwa wax ka qaata shoogyada, filtarka korontada ku shaqeeya, furaha cadaadiska Haydarooliga iyo silsiladda korantada
Haysashada 5 Saldhig Wax-Soosaar
In kabadan 20 Shirkado Shirkadeed
In ka badan 1000 shaqaale
Shirkaddu waxay daboolaysaa aag dhan 30000㎡
Bannaanka wanaagsan, tayada kalsoonida iyo qiimaha wax ku oolka ah had iyo jeer waa waxa aan ku raad-joogno.
SNS 4V2 Taxanaha Aluminium Daawaha Solenoid Madax Ai ...
Sharaxaadda alaabta & ...
SNS APU10X6.5 tubbada pneumatic jumlada pu hawada p ...
Tilmaanta alaabta ...
SNS SC Taxanaha daawaha aluminium double / hal fal ...
Cabbirka caajiska (mm) 32 ...
SNS AC Taxanaha pneumatic daaweynta il daaweynta un ...
Tusaale AC1010-M5 AC2 ...
SNS 2W xakamaynta walxaha xakamaynta tooska ah ...
Tusaale 2W025-08 2W0 ...
SNS taxane biibiile xakamaynta gacanta pneumatic ...
Sifeynta alaabta & n ...
SNS SPC Taxanaha Lab Mawjada toosan Riix ...
SPC Taxanaha 8 Ballaca Ballaca ...
SNS SPL Taxanaha Lab xusulka L nooca caaga tubbada caaga c ...
2021 Shiinaha (Beijing) Bandhigga Caalamiga ah ee Haydarooliga Pneumatic iyo Sealing Technology
Febraayo / 25/2021
2021 China (Beijing) International Hydraulic Pneumatic and Sealing Technology Exhibition waxaa lagu qaban doonaa Xarunta Carwada Caalamiga ah ee Shiinaha laga bilaabo Juun 28th ilaa 30th, 2021! Waxay soo jiidan doontaa in ka badan 800 shirkadood oo ka kala socda in ka badan 10 waddan iyo gobollo ay ka mid yihiin ...
Waxaan kuugu hambalyeynayaa inaad gaadhay "Guul Labaad"
Sannadkan, SNS ma aysan dhaafin oo keliya shahaado-siinta dufcaddii ugu horreysay ee shirkadaha teknolojiyadda sare ee Gobolka Zhejiang sannadka 2020, tirada taxan waa 2583. Waxayna ku guuleysatay shahaadada "Zhejiang Science and Technology Small and Medium-size" oo ay soo saartay sayniska Zhejiang iyo Techn ...
SNS pneumatic wuxuu kaqeybqaadan doonaa PTC Asia gudbinta awooda Expo 2020